EFATRA MIANAKA VOATIFITRA TAO BELO : Niteraka korontana eo amin’ny fianakaviana sy ny fitondram-panjakana
Mikorontana ao an-tampon-tanànan’i Belo Amoron’i Tsiribihina tao anatin’ny roa andro izay. 5 juin 2018
Taorian’ny fitifiran’ny mpitandro filaminana azy efatra mianaka tao Antsiraraka ny sabotsy lasa teo. Voalaza fa adin’ny fianakavan’ny maty sy ny mpitondra fanjakana sasan-tsasany ao an-toerana no nahatonga ny olana ka niafara tamin’ny famonoana azy efatra ireo. Noho izany dia mikorontana ny fianakavian’ny maty, fanjakana ary ny mpitandro filaminana nandritra io roa andro io. Araka ny loharanom-baovao dia mpirahalahy ny telo tamin’ireo namoy ny ainy ary ny iray zanaka.
Hatreto mbola tsy fantatra mazava tsara ny antony nitifiran’ny mpitandro filaminana azy efatra iret satria tsy olon-dratsy izy ireo, raha ny loharanom-baovao ihany. Raha iverenana ny zava-nisy, ny sabotsy lasa teo no nivoaka avy tao amin’ny tribonaly ireo efatra mirahalahy ary nisy mpitandro filaminana nitifitra azy ireo avy hatrany ka maty tsy tra-drano. Voalaza hatrany fa nisy fianakavian’ireo namoy ny ainy nanatrika ny fitsarana ary izy ireo no vavolombelona tao.
Efa eo am-pelantanan’ny fianakaviana ny razan’ izy efatra mianaka ireo ankehitriny. Tsy manaiky izao famonoana ny havany izao ireto farany ka izany no mahatonga ny disadisa ao an-tampon-tanànan’i Belo Amoron’i Tsiribihina hatramin’ny ora nanoratanay izao.